Yemunharaunda: Gadzira Desktop Dhatabhesi Kuvandudza uye Kubvumirana Yako WordPress Siti
Kana iwe waita yakawanda yekuvandudza kweWordPress, iwe unoziva kuti kazhinji zvinowanzo shanduka uye nekukurumidza kushanda pane yako desktop desktop kana laptop pane kugara uchifanira kunetseka nezve kubatanidza uri kure. Kumhanya dhatabhesi renzvimbo kunogona kutorwadza, hazvo… sekumisikidza MAMP kana XAMPP kutanga webhu yemuno, kugadzirira mutauro wako wepurogiramu, wozobatana ne database yako. WordPress iri nyore nyore kubva pakuvaka
Takatamisa Mauto… Ungangoda Iwewo
Svondo, Ndira 31, 2016 China, May 19, 2016 Douglas Karr
Ini ndichave akatendeseka kuti ndakasuruvara zvisingaite izvozvi. Kana yakakwenenzverwa yeWordPress yekutamba yakarova pamusika uye dzimwe shamwari dzangu dzakatangisa kambani yavo, ini ndingadai ndisina kufara. Sesangano, ini ndanga ndaneta nekumhanyisa nyaya mushure mekubuditswa nemawebhu webhu avo vaizopa chero dambudziko neWordPress kwatiri. NeManagedhi eWordPress yekutambira, yedu inomiririra yakatsigira WordPress, yakaigadziridza kuti ikurumidze, uye yaive nezvimiro zvakanangana nekugadzirisa zvese zve
Chishanu, May 3, 2013 Mugovera, October 24, 2020 Douglas Karr
90,000 hackers ari kuyedza kupinda mune yako WordPress kuisirwa izvozvi. Chiverengero chisina musoro asi zvakare chinongedzera mukufarirwa kweiyo inozivikanwa pasi rese yezvinyorwa manejimendi system. Kunyange isu tichinyatsoziva nezve zvemukati manejimendi masisitimu, isu tine yakadzika, kuremekedza kwakadzama kweWordPress uye tinotsigira mazhinji emakasitoma edu kuisirwa pairi. Ini handidi kubvumirana neiye muvambi weWordPress uyo anonyanya kukanganisa pfungwa dzekuchengetedza nyaya neCMS.